"Hatao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra" Mat 6:10
Ny lanitra, dia tsy hafa fa ny toerana onenan’Andriamanitra. Any an-danitra dia tsy misy ota, eo amin’ny fanatrehan’Andriamanitra, ary tsy misy vato misakana ny amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Andriamanitra dia fantatra any an-danitra noho ny amin’ny fahamasinany sy ny maha-Mpanjaka Azy.
Ny tany kosa, dia ny toerana onenantsika olombelona, toerana feno ota. Ny fanatrehan’Andriamanitra marina dia takon’ny fahotan’ny olombelona. Ny sitrapon’Andriamanitra dia toherin’ny zanak’olombelona ary atakalony ny sitrapony. Vitsy ny manaiky sy manaja ny fahamasinan’Andriamanitra, fa mandeha araka izay tiany sy eritreretiny.
Jesosy Kristy, izay tsy hafa fa Irak’Andriamanitra, dia tonga hanorina ny fanjakan’Andriamanitra, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ny Filazantsara araka ny Matio dia mirakitra fampianarana ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra, na ny fanjakan’ny lanitra. Manoloana ny foto-kevitra tsy mijery afa-tsy ny zavatry ny tany, ny fiainana mandalo eto amin’izao fiainana izao, ,Jesosy dia tonga hitondra rafitra vaovao, araka an’Andriamanitra. Ny Jiosy dia mbola tsy nahalala ny fiainana any an-koatra, ary mbola nionona tamin’izay hita maso ety ambonin’ny tany: zanaka, tany, harena. Raha nirahin’Andriamanitra aza ny Mesia, dia Kristy izany, dia tsy nahafantatra an’i Jesosy ho Mesia izy ireo, satria fihevitr’olombelona ihany, Mesia hanafaka azy amin’ny fangejana izay nahazo azy aman-jato taonany manolona ny mpanjanan-tany.
Jesosy dia hitondra rivo-baovao, amin’ny alalan’ny fanjakan’Andriamanitra, fanjakana tsy mitovy amin’izay misy ety ambonin’ny tany, Andriamanitra no Mpanjaka, ny Lalàn’Andriamanitra no mifehy, ary ny Sitrapon’ANdriamanitra no mibaiko. Tsy Lalàna novolavolain’olona, fa avy amin’Andriamanitra mivantana, tahaka Ilay tamin’ny voalohany tamin’ny andron’i Mosesy, vato fisaka nisy ny Lalàna avy amin’i Jehovah mivantana no nalain’i Mosesy ary nentina teo amin’ny Zanak’Isiraely izany.
Ry Havana malala, raha mampianatra vavaka Jesosy, hatao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, dia faniriana lalina ny Azy mba hahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra ety ambonin’ny tany. Fantatr’i Jesosy fa ny fampanjakana ny sitrapon’Andriamanitra no hitondra fiadanana ho an’ny zanak’olombelona. Tsarovy, fa ny atao hoe lanitra, dia toerana anjakan’ny sitrapon’Andriamanitra zato isan-jato, ary vokatr’izany dia feno fiadanana sy fandriampahalemana ary fahasambarana. Jesosy, amin’ny maha-Iraky ny Lanitra Azy, dia manana hetaheta hanorina izany fanjakana feno fiadanana izany ety ambonin’ny tany. Izany no mahatonga Azy hanonona izany fiadanana izany isaky ny tonga nihaona tamin’ny mpianatra.
Hatao anie ny sitraponao: Lalàna tsy miankina amin’ny toko sy andininy, fa mifamatotra amin’izay tian’Andriamanitra. Indrisy fa ny Jiosy dia voafatotry ny didy aman-dalàna fa tsy ny sitrapon’Andriamanitra. Tonga soratra nahafaty ny Lalàna fa tsy namelona, ary saiky tratran’izany ilay vehivavy azo nijangajanga.
Ry Havana malala, mila mitodika amin’ny sitrapon’Andriamanitra isika amin’izao fotoana izao ary mamantatra izany tsara. Maro mantsy ny mihevitra fa ianareo mpivavaka, tsy mba mihevitra ny zava-misy ety an-tany fa ny any an-koatra any ihany. Tena mihevitra tokoa ny fiainana eto ny mpivavaka, ny kristiana, ary maka tahaka aza izy ny fiainana tonga lafatra any an-koatra, mba hahazoana miaina sahady ny fiainan-danitra dieny ety an-tany.
Hevero kely ange, raha tsy nisy ny fivavahana kristiana izay mitory famelan-keloka, angamba efa samy nifamono hofaty teto daholo ny zanak’olombelona, raha ny Silamo sy ny jentilisa fotsiny no teto. Raha tsy nandeha nivavaka moa ny olona ny andro Alahady, satria angamba tsy nisy ny Fiangonana, hevero fa angamba nandeha niangona nanao fahavetavetana tetsy sy teroa. Soa fa misy Andriamanitra ary misy ny Fiangonana mitory izany sitrapon’Andriamanitra izany, ka mahatonga ny olona hitodika amin’Andriamanitra sy ny sitrapony.
Noho izany, mahaiza mikatsaka mandrakariva izany sitrapon’Andriamanitra izany, raha te hahazo vahaolana eo amin’ny fiainana. Katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny sitrapony, hoy ny teny malaza nataon’Ilay Lehiben’ny fanjakan’Andriamanitra ety ambonin’ny tany dia Jesosy, izay sady Lohan’ny Fiangonana ihany koa.
Ry Havana, ao amin’i Jesosy no ahafantarana izany sitrapon’Andriamanitra izany. Ny Lalàna tao amin’ny Testamenta taloha dia fantarina ao aminy. Tonga mazava amintsika ny didy sy ny Lalàna rehetra tamin’ny andro taloha, rehefa hazavain’ny finoana an’I Jesosy. Andray, hafa loatra ity Jesosy ity. Rehefa miaraka Aminy, mazava ny zavatra rehetra. Izy tokoa ny fahazavan’izao tontolo izao.
Farany, ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra, dieny ety ambonin’ny tany dia mahatonga antsika sahady ho tonga vahoakan’ny fanjakan’Andriamanitra. Tonga olom-pirenen’ny lanitra sahady, ireo izay mangetaheta hanao ny sitrapon’Andriamanitra. Tonga mihavana amin’Andriamanitra sady mpiray fanjakana amin’ny olo-masina ny olona manao ny sitrapon’Andriamanitra. Raha tonga ny fotoana hihavian’ny fanjakan’Andriamanitra, dia tsy ho vahiny na mpivahiny intsony izy. Raha tonga ihany koa ny andro hahafatesana, dia hamantana any amin’ilay fanjakana be voninahitra efa niainany sy nanjakany tety ambonin’ny tany.
Ry kristiana Havana, manomboka androany, hevero ny sitrapon’Andriamanitra, ary lavo ankitsirano ny sitrapon’ny tena, sy ny an’izao tontolo izao. Raha manapa-kevitra amin’izany ianao, dia ho sambatra satria ilay fanjakana tsy misy fitaka sy tonga lafatra no idiranao sy iarahanao! Dia mahereza!